अमेरिका नेकपासँग रिसाएको छ नि भनेर सोध्दा माधव नेपालले जंगिएर भने- कसैको दबाबमा नेपाल जाँदैन | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
अमेरिका नेकपासँग रिसाएको छ नि भनेर सोध्दा माधव नेपालले जंगिएर भने- कसैको दबाबमा नेपाल जाँदैन
काठमाडौं, २१ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ । उपप्रधानमन्त्री हुँदै देशको प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका उनी नेकपा विदेश विभाग प्रमुख हुन् । उनीसँग प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि ऋषि धमलाले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा गरेको कुराकानीः
नेपाललाई चीनले रेल दिने भयो होइन ?
रेल दिने, के दिने भनेर नचाहिने कुरा गर्नुहुँदैन ।
बाहिर त्यही तिनै कुराको चर्चा भइरहेको छ नि ?
चीन भनेको धनी देश हो । अरु पनि धनी देशहरु छन् । ती धनी देशहरुले कुनै न कुनै रुपले सहयोग गरेका हुन्छन्, गरेको पनि छ । ती देशहरुबाट भ्रमण हुँदा केही सहयोगका सम्झौताहरुमा सही पनि हुन्छन् । ती देशहरुले खासगरी कनेक्टिभिटीमा बढी जोड दिएका हुन्छन् ।
हाम्रो देशले चीनले ऋणमा दिएको रेल थेग्न सक्छ ?
चीनले ऋणमा दिएको रेल थेग्न सक्छ वा सक्दैन त्यसबारेमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ । नेपालले त्यसबाट हुने व्यापारिक, आर्थिक, टुरिजम लाभको पक्षेलाई हेरेर जाने हो । त्यसको लागि वैकल्पिक मार्ग चाहिन्छ । एकपक्ष मात्रै भएर हुँदैन । पहिला हामीले पटक–पटक हण्डर नखाएको होइन । त्यसमा विकल्प भयो भने नेपालले त्यस्ता खाले चुनौतीको सजिलै सामना गर्न सक्छ । नेपाली जनताले सामना गरेका पनि हुन् । पानी नखाएर पनि कालापानीको युद्धमा लड्न सक्ने नेपाली जनताहरु हुन् । डिजल नपाउँदा पनि पैदलदेखि साइकिलको भरमा हिड्ने आँट गरेका हुन् । यस्ता त्यागले गर्दा नेपाली जनतामा प्रगाड रुपले देश भक्ति जागेको छ । यस्ता घटनाले छिमेकी मुलुकमा कता–कता तीतोपन ल्याइदियो । त्यसले नेपाली जनमानसमा निकै ठूलो आघात पु¥याउने काम भयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीति चीनमुखी हुन थालेको हो ?
नेपालको नीति कहिल्यै पनि चीनमुखी पनि हुँदैन, भारतमुखी पनि हुँदैन । दुवै देशसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ । त्यस कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । आर्थिक र व्यापारिक कुरा जुन छ, जहाँ लाभ हुन्छ त्यहाँ सम्बन्ध रहन्छ । जहासम्म नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा छ । त्यसमा कुनै पनि शक्ति बन्दी हुने कुरा नेपाललाई स्वीकार्य हुँदैन । अनुचित शर्त बन्दीलाई नेपालले स्वीकार गर्दैन ।
चीनबाट ऋणमा रेल ल्याउने पक्षमा नेकपा छैन हो ?
तपाईं कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ । ऋणमा ल्याउने, डोनेसनमा ल्याउने । तपाईंहरुले राज्य सञ्चालनको कुरै बुझ्नुभएको छैन । राज्य सञ्चालन गर्दा कतिपय ऋण हुन्छ, कतिपय अनुदान हुन्छ । अहिले ऋण हुन्छ, भोलि गएर अनुदानमा रुपान्तरण हुन्छ । यो चलिरहने प्रक्रिया हो । यसबाट एकदमै बर्बाद भयो भनेर अत्तालिनुपर्ने आवश्यकता छैन । यसको विरोध गर्नुभनेको चीनबाट नेपालले लाभ लिन चाहेको छैन ।
नेपालमा चीनको हस्तक्षेप बढेको छ नि ?
केमा हस्तक्षेप भएको छ ?
नेकपाले त नेपालमा सी विचारधारा लागू गर्ने भनेको छ नि ?
त्यो सी जीन पिङले चीनको लागि ल्याएको सी विचारधारा हो । नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको आफ्नै विचारधाराहरु छन् । त्यसैले नेपालको पार्टीको आफ्नै सिद्धान्त छ, चीनको पार्टीको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ । तर, मूल पक्ष भने माक्सवाद, लेनिनवादमा चीनको पार्टी र हाम्रो पार्टीको एउटै धारणा छ । सिद्धान्तमा, नैतिकतामा, विकास निर्माणमा, कार्यकर्तालाई सुपठित, सुयोग्य, सिद्धान्तनिष्ठ बनाउनुपर्छ भन्नेमा, जिम्मेवारी पूरा गर्न योग्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुवै देशका पार्टीको विश्वास छ । सिद्धान्तर विचार मिलेपछि पारिस्परिक सहमति हुन्छ ।
तर, भाइचारको सम्बन्धमा जसरी सम्झौता गर्नुभयो उपयुक्त थियो त्यो समय ?
कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ । भाइचारको सम्बन्धमा सही भइराखेकै हुन्छ । भाइचार दुईवटा पार्टीबीचमा छ त केचारा सही हुन्छ त ?
चिनीया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले तपाईंहरुलाई तालिम दिए नि ?
हामीले तालिम लिएको पनि छैन । दिएको पनि छैन ।
कसरी जाने भनेर तालिम दिएका छन् नि ?
पटक्कै दिएको छैन । यो सब गलत कुरा हो ।
अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चीनका शीर्षत नेताहरुले तपाईंहरुलाई सुझाव दिएका छन् नि ?
यो सब गलत कुरा हुन् । जे हल्ला आयो त्यसलाई पत्याउन थाल्ने हो भने यहाँ उल्टा, पुल्टा सबै कुरा आएको छन् । त्यो कुरा छोड्नुस् । उनीहरुले आफ्नो देशको अनुभव मात्रै सेयर गर्ने हो । थोपर्ने होइन, माओत्छेतुंगको समयमा त थोपरेनन् भने अहिले थोपर्छन् । चीनले धेरै अनुभवहरु बटुलेर परिपक्व भइसकेको छ । त्यसकारण उसले आफ्नो सिद्धान्त, विचार अरुलाई थोपर्ने गर्दैन ।
पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्टको सरकार बनिसकेपछि चीनको गतिविधि बढेको छ नि ?
हामी नेपालमा विकसित मुलुकहरुको गतिविधि बढोस् भन्ने चाहँदैनौं र ? संसारको लगानी नेपालमा आओस् भनेर हामी चाहँदैनौं ? अभैm हामीले खोजेजस्तो, चाहेजस्तो लगानी भएकै छैन । यहाँ कृषि क्षेत्रको विकास हुनुपर्ने त्यतिकै आवश्यकता छ । त्यसमा कति वाह्य कति स्वदेशी । त्यसैगरी उद्योगधन्दा, कलकारखाना, जलविद्युत्, टुरिजम, खानीहरुको खोजी र उत्खनन्लगायतका काममा लगानीको आवश्यकता छ । जसको कारणले देशमा रोजगार स्थापना गर्ने काम हुन्छ । अनि त्यत्तिकै अत्तालिनुपर्ने कुरै छैन ।
मलेसियामा चिनीयाँ लगानी असफल भएको छ नि ?
कहिले असफल भएको छ ?
त्यहाँबाट चिनीया लगानी फिर्ता भएको होइन ?
कहिले भयो मलाई थाहा छैन ।
बीआरआईको दोस्रो ठूलो सम्मेलन जुन शि जिन पिङले गर्नुभएको थियो । त्यहाँ म पनि गएको थिएँ । मलेसियाले बीआरआईको प्रोजेटको बारेमा भरपुर प्रसंसा गरेको थियो । त्यसकारण यी झुटा कुराको पछि नलाग्नुस् ।
माल्दिभ्सबाट चिनीयाँ लगानी फिर्ता भयो नि ?
फेरि यस्तै–यस्तै हावादारी कुरामा नजानुस् । कतिपय कुरामा समस्या होलान्, ब्यापारमा समस्या हुँदैन ? आर्थिक सम्बन्धमा केही समस्या हुन सक्छ । दुई देशबीचको छलफलबाट मिलाएर अगाडि बढ्छन् ।
सी जीन पिङको विकासको मोडल संसारमा सफल छ हो ?
सी जीन पिङको विचार चीनको लागि लागु हुने कुरा छ । हामी आफ्नो विचारको निर्यात् गर्दैनौं । यति भनिसकेपछि पुगेन ? चीनले आफ्नो विचार लागु गर्छ । हामी आफ्नो विचार लागु गर्छौं ।
तर, बीआरआईमा तपाईंहरु के कारणले जानुभयो ?
आजको हो ? बीआरआई । सुरु भएको सिआनबाट होइन ? त्यतिबेला कुनै रेलवेको विकास भएको थिएन । हवाइजहाज थिएन, ऊटबाट व्यापार हुने गर्दथ्यो । पैदल, खच्चडबाट ब्यापार हुने गर्दथ्यो । त्यो बेलामा सिआन्बाट वस्तुहरु इरानहुँदै सबैतिर जाने गरेको इतिहास थाहा छ कि छैन ? नेपालबाट काठमाडौंका ब्यापारीहरु सिआन शहरमा गएर पसल थापेको थाहा छ कि छैन ? चीनबाट त्यतिबेला नून ल्याउने गरेको थाहा छ कि छैन ? ‘ल्सामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ भनेको सुन्नुभएको छ कि छैन ? आजका कुरा हुन् तिनीहरु ?
त्यसो भए बीआरआईमा जाँदा नेपाललाई फाइदा छ ?
सबै देशलाई जोड्ने कुरा पनि गलत हुन्छ ? सडक, बाटो, रेल, जलमार्ग, हवाई यातायातले जोड्ने । यो सबै अपराध हो ? जोड्दा त तपाईंलाई कुन कुराको व्यापार गर्नु छ, कुन कुराको आयात, निर्यात गर्नुछ त्यो गर्नुस् न तपाईं । त्यसले तपाईंलाई घाटामा जानुस् भन्छ ? नक्कली सामान किन्नुस् भन्छ ? आपैm नक्कली चिजमा फस्नुहुन्छ भने को जिम्मेवार हुन्छ । तपाईं सबैभन्दा नक्कली चिज किन्नुहुन्छ । न्यूजिल्याण्डमा मैले देखेको आठ प्रकारको किवी हुँदोरहेछ । ए ग्रडको किवी सबैभन्दा धनी देशमा जाँदोरहेछ । नेपालमा आठौं नम्बरको आउँछ कि छैटौं नम्बरको आउँछ त्यो किवी सस्तो हुँदोरहेछ ।
चीनले नेपालमा नौवटा परियोजना थाल्ने भनेको छ ती सबै परियोजनाहरु कार्यान्वयन हुन्छ ?
चीनले जे दिन्छ त्यहीं नेपालले लिने होइन । हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार लिने हो । हाम्रो आवश्यकता के छ त्यो लिने हो ।
चीनसँग तपाईंहरु के के चाहनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा कनेक्टिभिटी हो । रेल, यातायात, बाटो, नाकाहरुबाट धेरैभन्दा धेरै बाटो खुल्यो भने सामानहरु आओत, जाओत हुन सक्छ । रेल भयो भने धेरै सस्तो, सजिलो हुन्छ । अर्को विकल्प सामुन्द्रिक बाटो पनि हुन्छ । बाटो भएपछि सस्तो सामान दिन्छ भने किन ब्यापार नगर्ने ? इण्डियाले सस्तो दिन्छ भने उसको किन नलिने ? बाटोको विकल्प भएन भने मनोपोली हुन्छ । त्यसले कम्पिटिसन हुन दिँदैन । जब विकल्प हुन्छ मनोपोली हुँदैन । एउटा मात्रै डाक्टर, अस्पताल छ भने उसको मनोपोली चल्दैन ? यत्ति पनि थाहा छैन ?
तर, काठमाडौं रेल ल्याउन धेरै खर्च हुन्छ नि ?
त्यसलाई इकोनोमिक सोसेल र स्ट्राटेजीको कनेक्टिभिटी हुनुपर्छ । त्यसलाई ब्यापक रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले नै घाटा भयो भने पनि दीर्घकालीन रुपमा त्यो लाभदायी छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।
नेपाललाई लाभदायी छ ?
चीनको एक करोड चालिस लाख मान्छेहरुको थोरै एक प्रतिशत पनि नेपाल आयो भने टुरिजमको के हुन्छ अवस्था ? चिनीयाहरु संसारका अरु देशमा जानु हुने अनि नेपाल आउनुहुँदैन ?
रेल आउँदा चीनबाट काठमाडौं आउने धेरै होला तर काठमाडौंबाट के लिएर जाने ?
उत्पादन गर्नुपर्छ ।
उत्पादन गर्ने क्षमता छ त ?
उत्पादन गर्ने वस्तु छ । उत्पादनका निम्ति हामीले लगानीकर्ताहरु खोज्नुपर्छ । तिनलाई राज्यले प्रात्साहित गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने नेपालबाट धेरै चिजहरु बाहिर लान सकिन्छ । अहिले नै नेपालबाट कतारमा तरकारी बिक्री हुँदोरहेछ । गल्फकन्ट्रीहरुमा नेपालबाट तरकारी जाँदोरहेछ । इलाम, धनकुटाबाट तरकारी बंगलादेशमा बिक्री हुन्छ । नेपालबाट तरकारी, जडीबूटी, कफीहरु जान सक्छ । युरोपियन मुलुकमा हिमालयन कफी सेन्टरहरु छन् । विश्वको सबैभन्दा राम्रो हिमालयन कफी हो । यहाँका जडिबूटी खाएका भेडा, च्याङ्ग्रा, खसी, बोकाहरु हुन्छन् । मासु पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । यहाँ सफा पानीमा उत्पादन गरिएका माछाहरु हुन सक्छन् । माल्दीप्सले आफ्नो आम्दानीको ३० प्रतिशत माछाबाट गर्छ भने नेपालको पनि सम्भावना होला नि ।
त्यसो भए केरुङ–काठमाडौं रेल आइपुग्न कति समय लाग्छ ?
त्यो कुरा मलाई सोध्ने होइन । यो कुरा एउटा टेक्निकल मान्छेलाई सोध्नुस् । चीनको क्षमताको कुरा गर्नुहुन्छ भने त उसले एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रि एयरपोर्ट बनाउने रहेछ । भियतनाममा डेढवर्ष बनाउने रहेछ । भारतको हैरदावमा तीन वर्षमा बनाएको रहेछ । नेपालमा आठ वर्ष भन्छन् । लाजमर्दो छ । आठ वर्षमा एउटा हाइड्रो पावरको उत्पादन गर्न सक्दैनौं ।
राष्ट्रिय गौरवका प्रोजेटहरु १० वर्षसम्म तयार गर्न सकेको छैन नि ?
छिटो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । कामको जिम्मा लिएर छिटो नगर्नेलाई जबसम्म दण्डित गरिँदैन । तबसम्म यो प्रवृत्ति सुध्रिनेवाला छैन ।
चिनियाँ राष्ट्रिपतिको नेपाल भ्रमण सफल हुन्छ हो ?
सफल हुन्छ । सफल गराउनुपर्छ । यो राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र गौरवको कुरा हो ।
अब नेपालमा चीनको लगानी ह्वात्तै बड्छ ?
यसले राम्रो सन्देश दिन्छ । संसारभरि नेपालको नाम त चल्छ नि ।
अमेरिका त तपाईंहरुसँग रिसाएको छ नि ?
कसैको दबाब नेपाल जाँदैन । नेपालको पनि बुद्धि छ नि । के नेपाल चाहिं बुद्धिहीनहरुको देश हो । बुद्धि भएकाहरुको देश हो । शान्ति प्रक्रिया ल्याउन सक्ने, लोकतन्त्र ल्याउने सक्ने अनि हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति चलाउँन सक्दैनौं ?
तर, नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित छैन नि ?
सन्तुलित छ । हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो ।
विदेशीको स्वार्थ अनुसार तपाईंहरु नीति बनाउनुहुन्छ नि ?
ती कुराहरुमा हाम्रो बार्गेनिङ पावर कमजोर भएको हो । आफ्ना मान्छेहरुलाई त्यो ढंगले ट्रेन गर्न नसकेको कारणले पनि हो । तर, नेपाल कतैतिर ढल्किन जरुरी छैन । नेपालभित्र सर्वोपरि राखेर चल्नुपर्छ ।
तपाईंहरु चीनतिर ढल्केको होइन ?
कतै पनि ढल्किँदैनौं हामी ।
चीनसँग पहिलाभन्दा बढी नजिक त भएको हो नि ?
अहिले भर्खरै भारतबाट आयो भने त्यसलाई भारततिर ढल्केको भन्ने ? चीनबाट आयो चीनतरि ढल्केको भन्ने ? युरोपबाट आएमा युरोपतिर ढल्केको भन्ने ?
नेपालको नीति नेतामुखी भयो देशमुखी भएन ?
नेतामुखी हुनुहुँदैन । देशमुखी बन्नुपर्छ ।
नेपालमा विदेशी लगानी बढ्छ अब ?
सम्भावना पनि छ, आवश्यकता पनि छ ।
कम्युनिस्टको सरकार बनेपछि विदेशीले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो भएन नि ?
कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार २०५१ सालमा पनि थिएन र ? त्यो बेलामा म आपैm परराष्ट्र मन्त्री थिएँ । युरोपका सारा देश भ्रमण मैले गरेको हुँ । जापानमा गएर मैले कुरा गरेको हुँ । त्यहाँका विजनेम्यानहरुसँग । त्यसकारण मनमा भएका संसयलाई त्यहींबेला हटाइसकेका छौं ।
तर, जति आउनुपर्ने हो केपी ओली नेतृत्वको सरमारमा त्यति आएन ?
कतिपय नीतिले अवरोध खडा गरेर होला । कतिपय कामको कार्यशैलीमा खरादेखिएर होला । ब्युरोक्र्याटिकहरुको कारणले पनि हुनसक्छ । हाम्रो यति धेरै पानी छ । किन बिजुली प्रशस्त छैन ? किन यहाँ काम गर्ने शैली नै भएन ?
अहिले भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर र प्रगाड छ ?
बाहिरी कुरा चलिरहेकै छ नि । अब भित्री कुरा मलाई थाहा भएन । चुनावको कारणले पनि हुन सक्छ ।
तपाईंहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन मोदीले लिनुहुन्छ ?
मोदीजीको के प्रतिक्रिया मैले बुझेको छैन । नबुझिकन त्यतिकै बोल्ने बानी राम्रो होइन ।
त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उच्चाई बढेको हो ?
तपाईं व्यक्तिको नाम लिएर लडाउने काम नगर्नुस् । त्यसो नगरौं देश अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो बढाउने काम कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अरु विकल्प पनि छैन ।
तर, जनताले त विकल्प खोज्न थालिसकेका छन् ?
अरु को छन् गतिला ? यहाँ सबै एक–एक छन् खुट्टी नदेखेर मात्रै हो । सबैका पर्दाफास भयो भने सबैका कुरा बाहिर आउँछन् । हामीमा त्रुटी होला । त्यसलाई रिअलाइज गर्नुपर्छ त्यसलाई सुधार गर्ने दायित्व हाम्रो हो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तपाईंको पनि नाम जोडिएको छ, अख्तियारले बयानको लागि बोलायो नि ?
नचाहिने कुरा नगर्नुहोस् । यस्तै–यस्तै फटाहा कुरा गरेर तपाईं हिड्ने हो ? नभएको कुरा गर्नुहुन्छ मलाई अख्तियारले कहिल्यै बोलाएको छ ? मलाई बोलाउनुपर्ने के कुरा छ त्यहाँ । मेरो तर्पmबाट आजसम्म कुनै पनि अनुचित काम भएको छैन । कतैबाट एक धूर जग्गा, एक रुपैयाँ दिएको छैन अनि मलाई बोलाउँछ ?
बाहिर समाचार त आयो नि माधव नेपाललाई बोलायो भनेर ?
हिजो राति पुलिस कष्टडीमा माधव नेपाल परे भन्ला त्यसलाई मान्ने ? माधव नेपाल रक्सी खाएर बाटोमा लडिरहेको थियो भन्ला मान्ने ? यस्ता झुटा कुराहरुको पछि नलाग्नुस् ।
त्यसो भए ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तपाईंको कुनै संलग्नता छैन ?
कुनै हालतमा छैन । ललिता निवास होइन मेरो प्रधानमन्त्री निवासको निर्माण गर्ने कुरा हो । त्यसमा जस–जसले बदमासी गरेका छन् ।
शिवमायाले गाँठो फुकाइन, उपसभामुखमा दलहरुको हानथाप
माघ ६, काठमाण्डौ । सभामुख को बन्ने भन्ने टुङ्गो लागेसँगै अब निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने
निर्भया बलात्कार हुँदा नाबालिग पवन गुप्ताले पनि फाँसीको सजाय पाउने
निर्भया बलात्कारमा संलग्न चारजना दोषी ठहर भएसँगै भारतको अदालतले फाँसीको सजाय र मिति तोकिसकेको छ